Madaxweyne Siilaanyo: Ma Siddeed Kun (8,000) oo Qof? | Togdheer News Network
Madaxweyne Siilaanyo: Ma Siddeed Kun (8,000) oo Qof?
Hargeysa (Togdhnews)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa ka dareen-celiyey warbixin Agaasimaha Guud ee cusbitaalka Hargeysa Dr. Axmed Cumar Askar ka siiyey tirada dadka bukaan-socodka ah ee bil kasta xaalad caafimaad u yimaad qaybta gargaarka degdeg ah ee cusbitaalka weyn.
Madaxweyne Axmed Siilaanyo oo kormeer ku tegay cusbitaalka Guud ee Hargeysa shalay, isla markaana xadhigga ka jaray qayb cusub oo loo dhishay gargaarka degdeg ah, isla markaana dhagax-dhigay dhisme loo samaynayo umulaha iyo daaweynta haweenka, waxa uu si taxadar leh warbixin uga dhegaystay Dr. Axmed Cumar Askar oo ka xog-waramay tirada dadka bukaanka ee cusbitaalka ugu yimaad.
“Madaxweyne, halkani waa qaybtii hore ee gargaarka degdeg ah, waana halkii bukaan-socodka ee Ingiriisku inooga tegay, waxaana la dhisay sannadkii 1953-kii, markii aynu dalka soo galnay waxa aynu halkan ku bilawnay saddex sariirood, kadibna waxa aannu dib u dhisnay meel ilaa 8 sariirood ah, waxaanna Ilaahay mahaddii ah in aynu maanta furayno meel ah ilaa 50 sariirood,” ayuu yidhi Agaasimaha Guud ee Cusbitaalku.
Warbixintaas kooban, kadib, waxa Madaxweynuhu gudaha u galay qaybta bukaan-socodka ay markaas jiifeen dad loo samaynayo gargaar caafimaad oo degdeg ah, waxaanna mar kale makarafoonka qabsaday Agaasimaha Guud ee Cusbitaalka oo warbixin siiyey Madaxweynaha, waxaannu yidhi; “Halkani waxa inoo yaal bukaanno, inta badana waa cidhiidhi oo way buuxdaa, marka aan qiyaasnana bil kasta waxa ina soo siyaarta oo bukaan-socod inoogu yimaad ilaa sideed kun (8,000) oo qof…..”
Hasa yeeshee, waxa hadalka soo dhexgalay Madaxweyne Siilaanyo oo u muuqday inuu u qaadan waayey tirada dadka bukaanka ah ee Agaasimaha Guud sheegay inay bil kasta yimaadaan cusbitaalka Hargeysa, waxaannu yidhi; “Ma Siddeed kun (8,000) oo qof?
Kadibna Agaasimaha Guud ayaa hadalkiisii Madaxweynaha ka dhexgalay sii watay, waxaannu yidhi; “…Ayaa cusbitaalka yimaad oo bukaan-socodka lagu eegaa, inta la dhigaana waxa ay noqonaysaa ilaa 500 (shan boqol) oo bukaan ah oo cusbitaalka lagu daweeyo bil walba, qaliinada aanu samayno waxa ay noqonayaan ilaa laba kun (2,000) oo qof oo qaliino loo sameeyo sannad kasta. Dumarka ku umula waxa ay noqonayaan ilaa 3 boqol (3,00) oo dumar ah.”
Dr. Axmed Cumar Askar, ayaa u sheegay Madaxweyne Siilaanyo in qaybta cusub ee loo dhisay cusbitaalka Hargeysa ay keenayso in dadka bukaan-socodka ah helaan goob nafis ah, kana nadaafad badan oo xaaladooda caafimaad lagula tacaalo.
Intaas kadib, waxa Madaxweynaha Somaliland oo dhagax-dhigay xarun cusub oo loo dhisi doono qaybta umulaha iyo daawaynta cudurada haweenka oo Cusbitaalka Guud ee Hargeysa yeelan doono, iyadoo Maamulka Cusbitaalku sheegeen in Wasiirka Maaliyadda marwo Samsam Cabdi Aadan ay qayb weyn ka qaadanayso maalgelinta dhismaha cusub ee hooyada iyo dhallaanka cusbitaalka guud.
Waxa kaloo Madaxweynaha Somaliland oo xadhigga ka jaray qaybta gargaarka degdeg ah (Outpatient) ee Cusbitaalka Guud ee Hargeysa, kaasoo loogu talogalay inuu qaado ilaa 50 qof oo xaaladooda caafimaad ee degdeg ah lagula tacaalo, iyadoo uu u qaybsan yahay laba qaybood oo loogu talogalay ragga iyo dumarka.
Xaflad loo sameeyey furitaanka qaybta bukaan-socodka amma gargaarka degdeg ah ee cusbitaalka Hargeysa shalay, waxa hadalo ka jeediyey Madaxweynaha Somaliland, Wasiirrada Caafimaadka, Maaliyadda iyo maamulka cusbitaalka.
“Farxad weyn ayey ii tahay in aan maanta (shalay) halkan cusbitaalka Hargeysa aannu nimaadno oo furno qaybtan (bukaan-socodka) ee hawsha badan gashay, waxaanan aad ugu mahadnaqayaa oo aan bogaadin u jeedinayaa intii ka qaybgashay fulinteeda, wax-ka-qabashadeeda iyo ficilkeedaba. Ahmiyadda weyn ee ay leedahay ilaalinta caafimaadka iyo daryeelka bulshadu waa xil na saaran iyo waajib aannu Ilaahay ka baryeyno inuu nala qabto, annaguna inta nagala gudboon aannu ka qaban doono, insha Allaah.” Sidaa waxa yidhi Madaxweynaha Somaliland.
Wasiirka Caafimaadka Dr. Saleebaan Ciise Axmed (Xaglo-toosiye), ayaa halkaas ka sheegay in qaybta gargaarka degdeg ah ahayd mid uu baahi weyn u qabay cusbitaalka Hargeysa, isla markaana hadda laga bixi doono baahidaas, maadaama qayb cusub loo dhisay.
“Madaxweyne, cusbitaalkan halkii uu marka hore ka ahaa cusbitaalka guud ee Hargeysa, waxa aannu u aqoonsanay inuu noqdo cusbitaal qaran oo u adeega dhammaanba Somaliland, laguna qabto adeegyada caafimaad ee ay dabooli kari waayaan cusbitaalada gobollada dalku. Waxa aannu go’aansanay in cusbitaalkan noqdo mid bixiya adeegyada caafimaad ee loot ago dibadda dalka Somaliland,” ayuu yidhi Wasiirku.
Waxaannu intaas ku daray; “Waxa aannu ku guulaysanay in aannu dhisno dhismayaal badan oo aan hore u jirin, waxa aannu soo kordhinay qalab xad-dhaafa oo casri ah, waxa aannu keenay dhakhaatiir aad u badan oo takhasusaadyo ah oo ajaanib ah. Waxa aannu ilaa hadda maraynaa in 50% ku guulaysano adeegyadii caafimaad ee dibadda loo tegi jiray aannu halkan ku bixino, iyadoo yoolkayagu yahay in 100% uu cusbitaalkani maalin aan fogayn uu bixiyo dhammaanba adeegyada caafimaad ee dadkeennu u baahan yahay.”
Wasiirka Caafimaadka, ayaa sidoo kale u mahadnaqay Wasiirka Maaliyadda marwo Samsam Cabdi Aadan iyo maayirka Hargeysa Md. Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid (Solteco) oo uu xusay inay gacan weyn ka gaystaan horumarinta cusbitaalka guud ee Hargeysa, isagoo xusay in maayirku lacag dhan $50,000 (konton kun) oo doollar kaga qaybqaatay dhismaha qaybta gargaarka degdeg ah ee la dhammaystiray, haddana uu $20 kun oo doollar ugu deeqay dhismaha umulaha iyo daaweynta cudurrada dumarka ee Madaxweynuhu dhagax-dhigay shalay.
Wasiirka Maaliyadda Somaliland marwo Samsam Cabdi oo hadal ka jeedisay xafladda loo sameeyey furitaanka qaybta gargaarka degdeg ah ee cusbitaalka Hargeysa, ayaa sheegtay inay laba baabuur oo kuwa caafimaadka ah (ambalaasyo) ay ugu talogashay in loogu adeego gurmadka degdeg ah oo qudha.
“Runtii meeshan (qaybta gargaarka) in badan ayeynu u baahnayn, anniguna waxa aan idiin hayey oo aan halkan idinku guddoonsiinayaa laba ambalaas oo loogu talogalay in loogu gurmado dadka shilalku qabsadaan iyo kuwa degdeg ah ee xaaladoodu liidato, in wax kale loo isticmaalana uguma aynu talogalin,” ayey tidhi marwo Samsam Cabdi Aadan.